DOWNLOAD Avro Lancaster TP464 DB AJJ v6 FS2004
Fa ny FSX & P3D Malagasy Bible clique eto
Ity fonosana ity dia misy ny drafitra fiaramanidina sy sidina natao hitantara ny tantaran'ny 617 Squadron RAF Dambuster Raid ao amin'ny Moehne sy Eder Dams 16 - 17 May 1943.
Ho hitanao ny drafi-panidinana amin'ny menu Start - All Programs - Rikoooo Add-ons - Avro Lancaster TP464 DB AJC v6 FS2004 - FlightSimulatorFiles
Ny Avro Lancaster dia efa-engined baomba ny Ady Lehibe Faharoa, novokarina tamin'ny voalohany amin'ny Avro ny Royal Air Force. Niditra fanompoana in 1942, dia nanao mihoatra noho 7000 gazety ary teo amin'ny Handley Page Halifax, ny tena baomba ny Royal Air Force nandritra izany fotoana izany. Nanjary nalaza noho ny alina fanapoahana baomba.
Teny avy amin'ny mpanoratra:
Toy ny teo aloha io fanafahana olana dia natao mba hilaza ny tantaran 'ny 617 Sqd Dambuster nanafika ny tany Ruhr tohodrano tany Alemaina 16-17 1943 May. Izany no nanome izany amin'ny alalan'ny sidina sy amin'ny alalan'ny tena afaka Dambuster Lancaster fiaramanidina avy Plane-Design. Ao amin'io dikan-ny lalana ho any amin'ny tohodrano no marina kokoa, satria misy
tsipiriany kokoa navoaka tao amin'ny boky sy ny aterineto noho ny nisy niverina tao 2003. Mbola misy ady ao amin'ny vaovao navoaka. Miankina izay loharano mamaky sy hampiasa ny.
Azo antoka fa raha mandray fiaramanidina eny an-dalana ny Crews no indray ao 1943 ianao dia hanana fahatakarana lehibe kokoa ny fa tena sarotra ny asa fitoriana dia.
Rehefa nipetraka teo amin'ny seza mpitondra sambonao ny "Just Jane" ao amin'ny UK, ary nampiasa ny fanaraha-maso no manana fahatakarana tsara kokoa ny Lancaster Ary rehefa levona ny fitsidihana ny Eder Dam ny tena fahalalana ny lalana dia nanidina ny.
Ny mampino fahaiza-manao ny Crews tsy azo marina milalao ao amin'ny simulator fa tsy maintsy azo antoka fa andeha ary avy amin'io Tetikasa amin'ny tsara lavitra vokany ny inona ny teny hoe "Dambuster" dia midika hoe ary ny fomba mahomby ny Lancaster dia toy ny fitaovana ampiasaina amin'ny nanafaka ny mahomby vokatra .
Downloads 6 705